(Milano) 17 Okt 2020 – Waxaa caawa ballansan labada naadi ee deriska ahee Inter Milan vs AC Milan oo ku ciyaaraya garoonka wayn ee San Siro kulanka caalamiga ah ee Derby Della Madonnina.
Dhanka Inter: Waxaa kooxda Conte dhowr laacib uga dhacay durayga Covid iyo Sensi oo ganaaxan, balse wax badan taasi u dhimi mayso dookhyada uu haysto Conte oo kala dooranaya shaxdiisa soo jireenka ah ee 3-5-2, ama 3-4-1-2, iyadoo ay shaxda dambe leedahay lambarka 10-aad oo uu buuxin karo Barella ama Eriksen.
Dhanka Milan: Romagnoli ayaa soo noqday waana khasab in lagu soo tuuro waayo waxaa maqan Gabbia. Dhexda Bennacer ayaa fooska ka leh Tonali si uu labada dhexe ugu wehliyo Kessie, Castillejo ayaa kaydka kululaynaya, waxaana bedelaya Leao. Ibrahimovic ayaa weerarka kusoo noqday, balse waxaan soo kabanin Rebic oo garabka ka sheeganaya.
KAYADKA LABADA KOOXOOD:
Previous articleSantos oo kansashay qandaraaskii rakhiista ahaa ee Robinho kaddib markii uu kufsi kusoo baxay
Next articleGOOGOOSKA: Everton vs Liverpool 2-2 (Liverpool oo lagu dhegey)